Abantu abasathethi ngeencwadi | Uncwadi lwangoku
Abantu abasathethi ngeencwadi kwakhona
Ngokwedatha evela kwi-Arhente ye-ISBN, kwi-2014, kunyaka ophelileyo ekukho iirekhodi, ISpain i-90 yamawaka eencwadi zoncwadi zapapashwa phakathi kwabapapashi kunye namaqonga okuzipapasha, abathengiswa kuwo Iincwadi ezizizigidi ezingama-20 zeentsomi, 2 kubo bobabo Imibala engama-50 engwevu.
Kwelinye icala, a I-38% yabemi baseSpain bathi zange bafunde okanye phantse soze, ngelixa i-62% eseleyo yi-20% kuphela efundwayo yonke imihla, apho kunokuthiwa kuphela I-9 yezigidi ezingama-46.77 zabantu baseSpain zithathwa njengabafundi abaqhelekileyo. Kwaye oku kuguqulela entweni? Ngenxa yokuba kukho ubonelelo olukhulu kodwa hayi ibango elingacacanga, elikhokelela ekubeni ndicinge njalo abantu abasathethi ngeencwadi kwakhona, ongafundiyo, obona uncwadi njengento eqhelekileyo yelinye ixesha. Umbuzo ngulo: Kutheni?
Ewe ikhava intle
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, umntu endandiqhelene naye wandibuza ukuba ndiyazi na "zeziphi iincwadi ezilungileyo" ukuba ndinike ilungu losapho eliqhelekileyo ukuba lifunde yonke imihla. Xa izindululo zam zingamqinisekisanga kakhulu, wayilahla i-tagline: Kuba khange bayikhulule entsha kwaGrey, akunjalo?
Eminye imizekelo ethi qatha ezingqondweni zethu yingqokelela yeencwadi ezindala ezinxitywa ngabanye emakhaya kuba "ikhangeleka intle", okanye umntu othatha incwadi kuba ikhava iyambiza kwaye ngelixesha umxelelayo ukuba lithetha ngantoni, yena sele eyishiyile. kwindawo yakho. Ewe kubonakala ngathi kukho isikrokro ngokubanzi sokuntywila kuncwadi olungaphaya kwebinzana elibhalwe kudonga lwe-Facebook elithe ngumbhali akukho mntu waziyo.
Xa ndandimncinci, ndandineencwadi ezininzi endlwini yam, zonke ii-Disney Gaviota editions ngemizobo yazo emikhulu, okanye kwishelufa katata wam (omnye wabafundi abazizigidi ezili-9) endandizityhila ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo, namhlanje ndibona abantwana abaphakamisa nje amashiya kwi-console yabo, abaya kufundisa iividiyo zemidlalo kwiYouTube xa beneminyaka esi-8 okanye abangayi kudlala nabanye abantwana kuba bezazi ngakumbi iindlela ze-gazillion zikamabonwakude . Ukuthetha ngoncwadi kuthetha ukwenza into abayidibanisa ngqo nesikolo kunye nezo ncwadi zibekiweyo ziphela zitsiba izahluko ezibini nangaphezulu nangona benolawulo kuzo ekupheleni kweveki.
Kwizizukulwana ezitsha, uncwadi luye lwagutyungelwa zezinye iindlela zokuzonwabisa ii-snapshots ezinje nge-cinema, umabonwakude, imidlalo yevidiyo kwaye, ngakumbi kule minyaka idlulileyo, itekhnoloji ebizwa ngokuba yi-Intanethi ene-Google ehlola umntwana oneminyaka emi-5 ubudala ukuba uyakwazi ukuvula phambi kwencwadi, ibali okanye nayiphi na enye indlela yokuncamathisela kuncwadi .
Kodwa le nto ayipheleli apho. Ebudaleni, abantu abaninzi kubonakala ngathi abafundanga okanye bathethe ngeencwadi nazo. Uhlala phantsi ukuze ube notywala kwaye uthethe ngesifebe kunye mengano, Umdlalo weZihlalo okanye indibano yokugqibela yeSave me. Ukuya kwelinye ixesha, kwilizwe elifanayo apho abantu abambalwa bahlanganisene kwikhefi ukurhabaxa kwiiprinta kunye neencwadi ezazicinezelwe ziindlela ezintsha zokuzonwabisa.
Elona candelo limbi alixoki kwinto yokuba Abantu abasafundi kangako okanye abayazi ukuba yeyiphi incwadi ethi Iminyaka Elikhulu Yodwa, iOdyssey okanye iGazi Lomtshato. Mhlawumbi ingxaki yindlela esenza ngayo ukuba abantwana abaninzi bazive ngathi bayaliwa kuncwadi besebancinci. Kodwa andinguye utata okanye utitshala. . .
Luthini uluvo lwakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Abantu abasathethi ngeencwadi kwakhona
Ndingumbhali, ndiyazithanda iincwadi, umyeni wam ngumbhali-mbali, uyazithanda neencwadi, umtshana wam sisithandi sobulumko nemvumi, uyazithanda iincwadi, umama utitshala wezibalo kwaye uyazithanda iincwadi ... abahlobo ngamagcisa, bayazithanda Iincwadi ... Ndifundisa iiklasi zoncwadi lwaseLatin American kunye noncwadi lwangoku kwaye ndiyabona ukuba kukho abantu abancinci abazithandayo iincwadi ... kukho abafundi endibaqwalaselayo
Kukho abafundi abafuna ukuqala iiwekhishophu zoncwadi, ukufunda iindibano zocweyo kwaye bafuna umntu oza kubakhuthaza kwaye abaququzelele. Kukho ootitshala abathanda ukufunda, Kukho abafundi abayithandayo inoveli yezembali abanye inoveli yolwaphulo-mthetho, baninzi abanye abathanda imibongo. Ke ndicinga ukuba baninzi kuthi abathetha ngeencwadi, ukuba siyakonwabela ukwabelana ngoko sikufundayo kwaye oku kuyasikhuthaza ukuba sifunde nabanye ababhali. Enkosi nge http://www.actualidadliteratura.com
Ndiyavumelana nokuvela kwakho. Ndicinga ukuba abantu namhlanje bayazi ngakumbi iteknoloji; Kodwa kwelinye icala, kufuneka ubenamaxesha ahlukeneyo kwaye izinto ezintsha ziyafumana ebaleni lokufunda, kodwa loo nto ayibathinteli abantu ekufundeni. Iincwadi ziye zaqhelana netekhnoloji, ndizifundile kaninzi kumaqonga e-intanethi (nangona ndikhetha iincwadi ezikwiphepha izihlandlo eziliwaka). Ziifashoni: ngenkulungwane ye-XNUMX ukuba ngumfundi onomdla kwakuyeyona nto iphambili, kwaye namhlanje inee-iPads kunye nee-iPhones. Nangona kunjalo, ezi fashoni zijikeleza, siza kubuyela "kwixesha elidlulileyo."
Ngayo yonke le nto ndithetha ukuba bekusoloko kukho, kukho kwaye baya kuba ngabafundi, ngamanani amaninzi okanye amancinci.
Njengomfundi we-Hispanic Philology kunye nomthandi woncwadi, ndingathanda ukubona abantu abaninzi benenkcubeko yokubhala, kodwa sinenkulungwane apho iindlela zahlukile. Uza kwenza ntoni…
UManuel Augusto Bono sitsho
Ewe, ndicinga okufanayo kwaye isiphelo kukuba ndiyaxolisa. Kuphela yile datha okanye imeko apho sinokuthi sichaze okwenzekayo kuthi eSpain nakwezinye iindawo emhlabeni.
U-Enyd Bliton, uSalgari, uEdgar RiceBurroughs nabanye abaninzi, ndizifunde ndingekabi neminyaka esi-8 ubudala. EReyes, babesoloko bendinika iincwadi namajoni enkcenkce.
Phendula uManuel Augusto Bono
Andizukuyeka. Kodwa ndithenga iincwadi, malunga namashumi amathathu anesithandathu ngonyaka, kunye nezo ndizifumana kwithala leencwadi. Okwangoku, njengoko ndikwiholide, ndafunda i-LA MUJER JUSTA, nguSandor Márai kunye nepolisa elingaze lindigwebe. Ndiyacacisa ukuba ayinamsebenzi ukuba yincwadi entsha okanye itafile eseleyo ... iigrey shades ezingamashumi amahlanu Andizifundanga kwaye andizimiselanga. Enkosi.
Ndivuma ngokupheleleyo, ndicinga ukuba bambalwa kwaye bambalwa kuthi abafunda ngokuzimisela. Xa ndandineminyaka eli-10 ubudala, ndafunda yonke into eyawela ezandleni zam (kwaye zazincinci kakhulu iincwadi zabantwana ngelo xesha) kodwa unyana wam ufunda kancinci. Xa sisiya kwivenkile ezithengisa iincwadi uthanda ukujonga ezincwadini kwaye uhlala endicela ezinye kodwa ekugqibeleni uzijonge ekhaya akazifundanga; Unamashalofu amabini azele ziincwadi ebendingazukuphupha ngaye ebudaleni bakhe, kodwa akaze afunde. Xa esekhaya (ngethamsanqa uchitha ixesha elininzi edlala esitratweni nabahlobo bakhe) ukhetha ukubukela umabonwakude okanye ii-youtubers kunye nabadlala kwithebhulethi. Kwaye inyani yile, andazi ukuba ndenzeni ukuze ndimthande ngokufunda.
Yoz nks sitsho
Molo, kuyonwabisa ukwazi ukuba uzama ukugxilisa ukufunda emntwaneni wakho, ndingathanda ukukunika uluvo malunga noku.
Ndicinga ukuba ingxaki yokuba kutheni abantwana bengafundi okwangoku isenokuba kule ndlela "bakhuthazwayo" ukuba benze njalo, mhlawumbi indlela ekucetyiswa ngayo isihloko okanye umbhali ayithandeki ngokwaneleyo.
Ndiyazi ukuba uninzi lwabantu abancinci ngoku lubandakanyekile kubuchwephesha, nangona kunjalo andinakukutsho ukuba kubi ngokupheleleyo, ndiyayithanda imidlalo yevidiyo ndineminyaka engama-22 kodwa abayithathi; Nangona kunjalo ndingakuxelela umzekelo uMtyholi Ukukhala Kwam abalinganiswa basekwe kwimisebenzi ye "The Divine Comedy" (1313) - uDante Alighieri, enye yiHalo enembali ebanzi kakhulu eneencwadi kunye neekomikhi. Yazi ukuba kwaneentsomi zesayensi zihlala zilikhoboka.
Inkolelo ka-Assassin esekwe kwinyani yokwenyani ye-mmm ha, yile ndlela itekhnoloji ikhuthaze ngayo abanye bethu ukuba baphande kwaye bafunde kwixesha elidlulileyo ukuba besingazi ngokupheleleyo okanye ngokungaphelelanga, ukuze umntwana asondele kwiincwadi zokwenyani. Logama nje nawe ungena kwilizwe lomntwana wakho kwaye uphande izihloko abazithandayo, ungamxhasa ngokumnika into yokufunda.
Ndifunde izinto ezininzi malunga nesi sifundo enkosi nakumntakwethu omncinci owayene-xbox okoko wayeneminyaka esi-7 okanye esi-8 ubudala kwaye ndandiqonda ukuba ikomiki okanye imanga inokuba luncedo kwezi meko; Ndibhekisa kwinto yokubasondeza kubugcisa besithandathu boluntu (uncwadi), kunye nendlela etsala ngayo umdla wabo wokufuna ukwazi ezona ncwadi zinzima (oko kukuthi) apho bafumana khona umbono olungileyo kwimidlalo yevidiyo, iimuvi, i-anime, njl.
Kutheni ungazami ukuqala ngento elolo hlobo? Umbuzo wokubandakanya izinto ezithandwa ngumntu kwinto ocinga ukuyifaka ukuyenza ibe nomtsalane inokusebenza, kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa nokuba iba lisiko ukwenza iibhondi, yamkele iyantlukwano.kunganyanzelisi nantoni na, ikwalungelelanisa umntu omdala ebuntwaneni namhlanje.
Ukungabikho kocalucalulo kutyekelo lwabo kunokuba basebenzise bona; Ekupheleni kosuku sonke sifunda isifundo esihle, nokuba sidlala esitratweni nabahlobo.
Yiyo loo nto mva nje xa abantwana bebona incwadi bebona "umsebenzi wasekhaya" emaphepheni kwaye iyadika, ilandelane. Ndicinga ukuba iqala ngokubabuza ukuba bathanda ntoni, ukubazi ngakumbi malunga nokuphanda into enokubakhokelela kulo mkhwa ulungileyo, inyani ayisiyiyo yokuba bakuxelele-funda le nto-kodwa kukuba bathathe incwadi ngokuthanda kwabo , ubazi, uzonwabise kwaye ufunde kubo. Ngokukhawuleza, ukongeza kufundo, ndiyakholelwa ukuba umntwana wakho uya kubonisa imbeko kunye nokunyamezelana ngezihloko ezahlukeneyo, imisebenzi, ababhali ...
Ukubulisa kunye nethemba lokungakhubekisi, kungakanani ukukhathazeka ngale ndawo yokujonga 🙂
Phendula uYoz Nks
USusana gonzalez sitsho
Enkosi kakhulu ngengcebiso! Ndiza kuzama ukubona ukuba iyasebenza na.
Phendula uSusana González
Ababhali abaya kwindawo kawonkewonke kulo nyaka ka-2017
Jo Nesbø kunye nogqirha wakhe Proctor. Uninzi lokuzonwabisa lwabantwana kunye nabantu abadala.